ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချို အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ စက်ရုံများ လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး | Ministry of Industry
Mon, 10/03/2016 - 12:48 -- Myat Thee
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် အောက်တိုဘာ ၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ Mother Industrial Co., Ltd. သို့ ငှားရမ်းထားသည့် အုတ်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန (တညင်းကုန်း)နှင့် အဆင့်မြင့်မီးခံအုတ်(တညင်းကုန်း)စက်ရုံ တည်ဆောက်အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အပေါ့စားနှင့် သဲကွန် ကရစ်အုတ်နှင့် အပေါ့စားနှင့် ဖိအားမြင့်သဲကွန်ကရစ် အုတ်စက်ရုံများသို့ လှည့်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ စက်ရုံ တာဝန်ခံက စက်ရုံအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ထုတ်ကုန် အမျိုးအစားများနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
တင်ပြချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်တွင် မိမိထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား ဈေးကွက်တွင်ယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချရမည်ဖြစ်၍ ဈေးနှုန်း ချိုသာပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရန်၊ စံချိန်စံညွှန်းမီအရည်အသွေးကောင်းမွန်ကြောင်း အာမခံနိုင်ရန်၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးဆန်းသစ်တီထွင်နေရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဈေးကွက်ကို မျက်ခြည်မပြတ်လေ့လာ၍ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အတိုင်း ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး စီမံထားရှိရန်လိုကြောင်း မှာကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ United Pacific Co., Ltd.သို့ ငှားရမ်းထားသည့် အမှတ်(၉)အထည်စက်ရုံခွဲ (အင်းစိန်)သို့ရောက်ရှိပြီး စက်ရုံ ငှားရမ်းကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ခင်းကျင်းပြသ ထားရှိမှုကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ပြည်သူအကျိုးရှိစေမည့် လုပ်ငန်းအစီအမံများ အမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် မှာကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် သမိုင်းလမ်းဆုံအနီးရှိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ Win & Win Co., Ltd. သို့ ငှားရမ်းထားသည့် ဂိုထောင်များသို့ရောက်ရှိပြီး ဂိုထောင်များအတွင်း ပစ္စည်းများသိုလှောင်ထားရှိမှုအခြေ အနေ၊ ဂိုထောင်များဝင်းအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းအစီအမံများကို အသေးစိတ် မြေပုံ၊ Drawing Structure များဖြင့် တင်ပြရန်မှာကြားသည်။
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် လှိုင်မြို့နယ် ယောဂီကျောင်းလမ်းရှိ လျှပ်စစ်နှင့် မော်တာစက်ရုံတွင် Shwe Ka Thar-Shindo Engineering & Manufacturing Pte Co.,Ltd. မှ “Chip on Film” ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံသို့ရောက်ရှိပြီး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ စက်ရုံအား Shwe Ka Thar-Shindo Engineering & Manufacturing Pte Co.,Ltd. နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ Flexceed Co., Ltd. တို့ပူးပေါင်း၍ အီလက်ထရွန်နစ် စက်ရုံတည်ဆောက်ပြီး Chip on Film များအား ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးပြီး ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ Chip on Film ဆိုသည်မှာ Polyimide ESifh Copper ပေါင်းစပ်ထားသည့် အလွန်ပါးလွှာသော ဖလင်ပေါ်တွင် အလွန်သေးငယ်သည့် ကြေးနီအခြေခံလျှပ်စစ် စီးကြောင်းကို ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Chip on Film သည် ပျော့ပျောင်းမှုရှိခြင်း၊ အပူဒဏ်ခံနိုင်မှုမြင့်မား ခြင်း၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသော Display Panel များရခြင်း စသည့်စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့် အမျိုးမျိုးသောအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် High Density Assembly Products များဖြစ်သော LED TV, Notebook, PC, Tablet, Smart Phone များနှင့် Inkjet Printer များတွင် တွဲဖက်၍အသုံးပြုသည့် Chip on Film များဖြစ်သည့်အတွက် ဈေးကွက်ဝင်ပစ္စည်း အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။